ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ရောင်းချနေတဲ့ မြေကွက်များအကြောင်း - The Lifestyle Myanmar
Home Lifestyle knowledge ယခုရောင်းချနေတဲ့ မြေကွက်များအကြောင်း သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံ
ယခုရောင်းချနေတဲ့ မြေကွက်များအကြောင်း သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံ
အစိုးရက မြေကွက်တွေရောင်းနေပါတယ်။ ဘယ်နားကမြေတွေလဲ? – ဒဂုံ (အရှေ့၊ မြောက်၊ တောင်၊ ဆိပ်ကမ်း) – ရွှေပြည်သာ – လှိုင်သာယာ – မှော်ဘီ (အသေးစိပ်စာရင်း ပုံတွင်ကြည့်ပါ)
ဖောင်ကဘယ်လောက်လဲ? – တစ်စောင် တစ်သောင်းပါ…ဘယ်နေ့အထိရောင်းမှာလဲ? – ၇.၁၀.၂၀၁၉ ကနေ ၈.၁၁.၂၀၁၉ အထိ(၁)လ တိတိရောင်းပါမယ်တဲ့…
ဘယ်နေရာမှာရောင်းတာလဲ? -ပုံမှာ မြေပုံထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖောင်က အကန့်အသတ်နဲ့လား? – အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဖောင်ဝယ်ဖို့ ဘာလိုလဲ? – မှတ်ပုံတင် မူရင်း/ မိတ္ထူ ယူသွားရပါမယ်။ – လူတစ်ယောက် (၁)စောင်ပဲရောင်းပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကရော? – ပုံနံမှာ ပြောထားပါတယ် ရန်ကုန်တိုင်းကာလတန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်းအပေါ် ကြမ်းခင်းဈေး သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲ့ဈေးတွေဘယ်ကသိရမလဲ? – ဟုတ်ကဲ့ မြို့တော်ခန်းမနားတစ်ဝိုက် လမ်းဘေးမှာရောင်းပါတယ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း အခွန်ရုံးနားတစ်ဝိုက်မှာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဘယ်တော့ဖောင်ပြန်တင်ရမလဲ? – ၁.၁၁.၂၀၁၉ မှ ၈.၁၁.၂၀၁၉ အတွင်းပြန်တင်လို့ရပါမယ်။ ဘယ်လိုရောင်းမှာလဲ? မဲနိုက်မှာလား? ဈေးပြိုင်လား? – ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကရွေးမှာပါတဲ့။ – မြေတစ်နေရာထဲကို အပြိုင်လျှောက်တဲ့သူရှိရင် ကော်မတီက သင့်တော်သူကို ရွေးပါလိမ့်မယ်တဲ့။ (ဘယ်လိုသင့်တော်သလဲဆိုတာ မရှင်းပြထားပါဘူး) – အသေးစိပ်စည်းကမ်းချက်ကို ပုံမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
စက်မှု့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများကရော? – မှော်ဘီ မြောင်းတကာစက်မှု့ဇုံကိုပဲလျှောက်ရပါမယ်။
ဘယ်တော့ငွေသွင်းရမလဲ? – ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာရသည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်း အကြေပေးသွင်းရပါမည်။ ဂရန်ရမှာလား? – မြေရပြီး (၆)လအတွင်း အဆောက်အဦးဆောက်ပြီးပါက ဂရန်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးမည်။
ပြန်ရောင်းလို့ရမှာလား? – (၃)နှစ်အတွင်း အမည်ပြောင်းခြင်း/တဆင့်ရောင်းချခြင်း ခွင့်မပြုပါ။ သတ်မှတ်စည်းကမ်းမလိုက်နာပါက ပြန်လည်သိမ်းယူခံရပါမည်။
ကဲ အဲ့လိုလေးတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြထားပေးတော့ သေသွားကြမှာမို့လားဟင်??? ပြောတော့လည်း ပြောတဲ့သူ အလွန်ဖြစ်တယ်။ နေပူထဲမှာ ဘူမသိ ကိုးမသိ အစိုးရကမြေပေးနေတယ်ဟေးဆိုပြီး ရပ်ကွက်ထဲကသူအေတွအေရာ၊ ပင်စင်စားအိုကြီးအိုမအေတွအေရာ၊ သူဌေးရော၊ ခွေးရော အတင်းတန်းစီကြ အခန်းထဲရောက်ဖို့ ကလမ်းမမြင် ကမ်းမမြင် ဘယ်လောက်ကြာမယ်မသိ? ကြားဖြတ်ကပေါ မူးလဲကြ ရန်ဖြစ်ကြနဲ့ ရောက်တော့လည်း မှတ်ပုံတင်ပြ တစ်သောင်းပေး ရော့ဖောင် သွားတော့ပဲ မေးတော့လည်းမဖြေနိုင်ကြဘူး စာရွက်ထဲဖတ်ကြည့်တဲ့…
ဖောင်တစ်စောင်တစ်သောင်း မြေလိုချင်နေတဲ့သူတွေက ရန်ကုန်မှာ သိန်းချီရှိတယ်။ ဖောင်ရောင်းရငွေ ဘယ်လောက်တောင်ရလိုက်မလဲ? ကျနော်ရှင်းပြသလိုမသိတဲ့ မိဘပြည်သူများ ဘယ်နှစ်ယောက်က ဖောင်ပြန်တင်ကြမလဲ? ကြမ်းခင်းဈေးကို ဘယ်လိုသိကြမလဲ?
ကျနော်ဖြေပေးထားတဲ့ဟာတွေကို တန်းစီတဲ့လူတိုင်း သိဖို့မလွယ်ဘူးလေ။ တစ်ယောက်ချင်းမဖြေနိုင်ရင် ကျနော်ပြောသလို အချက်လေးတွေ vinyl လေးတွေထုတ်ပြီး မြင်သာတဲ့နေရာလေးမှာကြေငြာထားပေးလေ။ ဖတ်ပြီး လိုချင်တဲ့သူ တန်းစီပေါ့။
အခုတော့ဗျာ… တကယ့်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး အလွန်စနစ် ကျသော အဖွဲ့အစည်းများလို့ ပဲပြောရဲပါတော့တယ်ဗျာ။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ရောင်းချနေတဲ့ မြေကွက်များအကြောင်း
Previous articleသီတင်းကျွတ်မှာ အမေစုကို လက်ဆောင်မပါဘဲ လာကန်တော့တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်
Next articleကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးကွတ်ကီးလေး တချပ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးဆုံး မေးခွန်း တစ်ခု
Web Master - October 13, 2019
မြန်မာနိုင်ငံကို ခါးလယ်က ထက်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ ဒီပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်က မြေတွေကို တရုတ်က ပိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂ ပိုင်း ပြတ်သွားခဲ့ပါပြီ။